LineageOS 17.1 waxay keentaa Android 10 ilaa Nexus 7 iyo Moto Z3 Play | Androidsis
LineageOS 17.1 waxay keentaa Android 10 ilaa Nexus 7 iyo Moto Z3 Play
Mid ka mid ah ROM-yada ugu caansan halkaas ayaa ah LineageOS, mahadsanidiin waa suurtogal in nolol lasiiyo taleefannada iyo kumbuyuutarrada duugoobay oo duugoobay sababo la xiriira cusbooneysiinta soo-saareyaasha. Mid ka mid ah kiisaskii ugu dambeeyay wuxuu leeyahay Android 11 Samsung Galaxy S2 oo leh ROM caan ah, aalad la soo saaray 2011.
Hadda maalmo yar ka dib waa la xaqiijiyay taas LinegaOS 17.1 wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku rakibto Android 10 laba qalab: Nexus 7 laga bilaabo 2013 iyo Moto Z3 Play laga bilaabo 2018. Kii ugu horreeyay wuxuu la yimid Android 4.3 (KitKat), laakiin wakhti kadib wuxuu helay cusboonaysiinta Android 5.1.1 (Lollipop), nooca uu kaniini ugu dambayn ku sii jiri doono.
1 ROM-yada horay loo heli jiray
2 ROM sidoo kale loogu talagalay Galaxy Tab S6 Lite
ROM-yada horay loo heli jiray
Bogga 'LineageOS Wiki' wuxuu horey u soo daabacay ROM-ka mid kasta oo ka mid ah, sidaas darteed wax walba waxay u marayaan rakibidda iyo soo degsashada qalabka la yiraahdo mid walba oo iyaga ka mid ah. Haddii aad leedahay mid ka mid ah boosteejooyinkan, wax walba waxay u marayaan nidaam si fudud u fudud, had iyo jeer way wanaagsan tahay inaad keydiso xogta iyo macluumaadka kahor intaadan sameynin.
Moto Z3 Play waxaa la sii daayay 2018 iyadoo Android 8.0 Oreo ah, wax yar ka dib waxay sii daayeen cusbooneysiinta Android 9.0 Pie oo ay ku sii jiri doonaan, laakiin hadda waa suurtagal in lagu rakibo Android 10. Waxaad haysataa Lineage OS 17.1 taleefanka HalkanWaxay kaloo bixisaa faahfaahinta wax walba oo ku saabsan ROM-ka.
Nexus 7 ee Google laga soo bilaabo 2013 wuxuu helayaa farqi muuqda, hoos u dhaca kaliya ayaa noqon doona qalabka, waa inaan xasuusnaano inuu la yimid Snapdragon S4 Pro, 2 GB oo RAM ah iyo keyd ah 16 ama 32 GB, iyadoo kuxiran qaabka la doortay. LineageOS 17.1 ROM ee Nexus 7 (2013) waa la heli karaa Halkan.
ROM sidoo kale loogu talagalay Galaxy Tab S6 Lite
Kiniin kale oo aad hesho ROM-ga caadadiisu tahay Lineage OS 17.1 waa Samsung Galaxy Tab S6 LiteWaxaa muhiim ah in la xasuusto in qaabku ka helay Samsung qaybtii tobnaad. Waa beddel la tixgeliyo, maaddaama waxqabadka ay yiraahdeen uu yahay mid la yaab leh oo laga soo dejisan karo Wiki Lineage Halkan.
LineageOS 17.1 waxay ku siineysaa lakab kale, codsiyo kale iyo waxqabadka ugu wanaagsan ee isticmaalka maalin-ka-maalin. Galaxy Tab S6 Lite waxaa shaaciyay Samsung bishii Abriil oo ku jira boggiisa qiimo aad u xiiso badan waana kiniin loo tixgaliyo hadiyad ka timid Boqortooyada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » LineageOS 17.1 waxay keentaa Android 10 ilaa Nexus 7 iyo Moto Z3 Play
Difaaca Aakhirada Difaaca Carruurta waxay cadeyneysaa Google Play Store inuu yahay Duurjoogta Galbeed: qol yar oo loogu talagalay dadka soo saara Indie
Sida loogu beddelo qoraalada codka qoraalka WhatsApp